Results 501 to 510 of 1004
02-28-2012 04:18 AM #501
tvkyfvkyfaejyDqdkwJhtaBumif; eJU pmvHk;aygif; tenf;i,frSm;,Gif;aeao;w,fqdkwJhtaBumif;/
ckavmavmq,f 19 rwfv eJU 20 rwfv2&ufawmh &Sdw,f/
"jznfhpGuf" ukd "jznhfpGwf" qdkawmh... &Dcsifw,f zwf&if;eJU/
badinf, barronbala, batoe, Chit.tat.lun.tu, foruall22, GeneralBoz, Incubuz, KaungKinPyar, kokoye, KoSai11, Lynn Eainthu, mgknow, Perigee, pieces, RunAtServer, silence, talkyboy, ThunderHawk, yokesoe, zzz
02-28-2012 04:45 AM #502
oH&kH; usLeHygwf,lwmu pvkH;u tkdifyDeJYyJ 0ifvkdY&r,fxifw,f/
uRefawmfh &kH;u pufeJY0ifMunfhawmh (pvkH; &kH;uyg)
This website is not available for your location.209.93.xxx.xx
vkdYNyaew,f/ olaNymwJh 209.93.xxx.xx tkdifyDukd tGefvkdif;rSm *l*JvfMunfhawmh US tkdifyDvkdYaNymaew,f/
achitsone, barronbala, batoe, changralong, Chit.tat.lun.tu, foruall22, GeneralBoz, Incubuz, kohtwe, kokoye, Lynn Eainthu, mgknow, MNO.BN, Perigee, pieces, RunAtServer, silence, talkyboy, ThunderHawk, yokesoe
02-28-2012 12:52 PM #503
ကို Jim ပြောတာထောက်ခံပါတယ်၊ အခု Silkair က အချိန်မှန်သော်ငြားလည်း၊ လေယာဉ်မယ်တွေဆက်ဆံရေးက စက်ရုပ်လိုပါပဲ၊
နောက်တစ်ခုက လေယာဥင်္ချိန်ပါပဲ၊ mai က လေယာဉ်ချိန်ပိုများပါတယ်၊ နောက်ပြီး silkair က ၀ယ်တိုင်း အမြဲတမ်း waitting ဖြစ်နေတာပါပဲ၊
ဆေးလာကုတဲ. သူငယ်ချင်းမိသားစုဆို ချိတ်လာတဲ.ပြန်မဲ.ရက်ထက်စောပြန်ချင်လို. ၊ ရက်ရွေ.လိုက်တာ၊ ရက်အားလုံးပြည်.နေတာချဉ်းပဲ၊
နောက်ဆုံး၊ ရန်ကုန်ကချိတ်လတဲ. နေ.ထိစောင်.ပြန်သွားရရှာတယ်၊ ကျနော်အရင်ကလည်း အဲလို ခဏခဏ ဖြစ်လို.၊ MAI ကို ပြောင်းစီးနေတာ၊
နောက်ဒီမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ. ကျနော်.ကလေးတွေ နဲ. အမျိုးသမီး၊ သူတို.ပြန်တဲ.ချိန်ဆို ၊ အများကလည်းပြန်ကြချိန်ဆိုတော. လေယာဉ် ဒိတ်
ရဖို. ၊ နှစ်လလောက်စော ဘွတ်ကင်တင်လည်း၊ silkair ကwatting ပဲဆိုလို.၊နောက်ကိစ္စပေါ်လို. ရက်ရွေ.ရင် ရဖို.လုံးဝမလွယ်လို.၊
MAI ကိုပြောင်းတင်ရတော.တယ်၊ ဒါနဲ.ပဲ အချိန်အရရော နေ.ရက်တွေအရပါ ကိုက်လို.၊ mai ပဲ စီးဖြစ်တော.တာကြာပေါ.၊ နောက် jetstar
သူလည်း အွန်လိုင်းကနေ၀ယ်လို.ရတယ်၊ လေယာဉ်ချိန်က နဲတယ်၊ ရက်ကြုံရင်တော.၊
ကောင်းတယ်၊ ဘတ်ဂျက်လိုင်းပီပီ၊ ဈေးက သက်သာအောင်ဝယ်လို.ရတယ်၊ လက်ဆွဲပဲ သယ်မယ်၊ ဆိုရင်ဈေးပိုသက်သာတယ်ထင်ပါတယ်၊
trSefawmh silkair u wpfaeUudk ESpfMudrf av,mOf&Sdygw,f..rSwfrdoavmufqdk&if reuf7em&Dausmf&,f aeUvnf 2em&D&,f 2pD;awmif aeUwdkif;&Sdwm.. MAI uawmif wpfaeUwpfMudrfyJ&Sdw,f..olu jetstar eJU code sharing vkyfxm;wJhtwGuf jetstar ysHwJh Akwf'[l; aomMum paeUqdk&ifawmh wpfaeUESpfMudrf&efukefudk&Sdw,f..'DZifbmupwmvm;bmv m;rodbl; tckaemufydkif; weFvm t*Fgqdk&if nydkif; 7em&DausmfysHwJh av,mOfvJ tJ'DhESpf&ufrSm&Sdw,f..aemufjyD;awmh aemufqHk;rSr&bl;qdk&if &efukefudk befaumufrSm transit cP0ifjyD; ysHwJh av,mOf nae4em&DausmfrSm&Sdw,f..'guawmh awmf&Hkqdkr0,fbl;xifw,f..befaumuf0ifjyD;rS&efukefj yefwm &efukefudkvJ n8em&DausmfavmufrSa&mufwmqdkawmh.. tJ'gaMumifh trSefu MAI u silkair xufawmif av,mOfcsdefenf;tHk;r,f (befaumufuae wqifh&efukefjyefwJh av,mOfcsdefxnfhrwGuf&ifaygh)
barronbala, Chit.tat.lun.tu, GeneralBoz, jim beam, kokoye, Lynn Eainthu, mgchaint, mgknow, MNO.BN, Perigee, pieces, RunAtServer, staraye, ThunderHawk, yokesoe
02-28-2012 03:36 PM #504
oli,fcsif;wpfa,muf 'Dae h oH&Hk;rSm tcGefay;zdk hqdkNyD; awmh tGefvdkif; bGwfuifwifvdkufwm ... olwdk h awG zkef;xJudkrwfaphcsfydk hay;r,fqdkwJh[mu waeomukefoGm;w,f a&mufrvmbl; tm;ay;vdkufygw,f ... jrefrmoH&Hk;yJuG,f 'Dae hr&awmhvJ reufjzefxyfBudK;pm;Munhfayghvdk h
barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, GeneralBoz, kokoye, kosatsu, Lynn Eainthu, mgknow, MNO.BN, mrlynn, Perigee, RunAtServer, staraye, ThunderHawk, Yamarmoto, yokesoe
02-29-2012 01:49 AM #505
အဲဒီကွက်လပ်ကြီးအတိုင်းကို confirm လုပ်လိုက်၊ ပြီးရင် Code ပြန်ပို့ ဘို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၊ နှစ်ခေါက်လောက်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။
မနေ့ က ကျွန်တော်အဲဒီလို နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်..
barronbala, Chit.tat.lun.tu, GeneralBoz, hellocatcat, kokoye, Lynn Eainthu, MNO.BN, mrlynn, Oscar Htun, Perigee, RunAtServer, ThunderHawk, yokesoe
02-29-2012 08:09 AM #506
Originally Posted by pyeayenyein
2 Budrf avmufprf;Munfhvdkufyg / ydkYygvdrfhr,f / uRefawmhfwkef;uvnf; yxr wpfacgufrSm rvmvdkY 'kwd,tBudrf vkyfvdkufawmhrS uk'fykdY wmyg /
badinf, barronbala, batoe, GeneralBoz, hellocatcat, kokoye, MNO.BN, mrlynn, Oscar Htun, Perigee, RunAtServer, staraye, yokesoe
02-29-2012 09:15 AM #507
လာပြန်ဘီ... ခြားနားခွန် တဲ့... မြန်မာသံရုံးကတော့ ရိုက်ချက်တော့ ပြင်းတယ်...
ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံသား မောင်စိုးအောင်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ခေတ္တလာရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ကျနော်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ကျနော်၏နို င်ငံကူးစာအုပ်ကို အသစ်လဲရန်အတွက် နိုင်ငံက
၀င်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်စေသော ၄၀%ကို တရားဝင်စင်ကာင်္ပူဒေါ်လာမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့တန်ဖိုး
ပြောင်းလဲပြီး MFDBတွင် ဆောင်စေပါသည်။
သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်စင်င်္ကာပူရှိမြန်မာသံရုံးတွင်သွားရောက်လျောက်ထားစဉ် ကျနော် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော
၀င်ငွေခွန်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ခြားနားခွန်ဆိုပြီး ယခင် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အခွန်များကို
ထို့ ကြောင့်ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေကို
အတည်ယူ၍ မည်သို့ မည်ပုံပြုလုပ်ရပါမည်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံတော်အခွန်ရုံးက၄၀%၊ စင်င်္ကာပူရှိမြန်မာသံရုံးက ခြားနားခွန် ဆိုပြီး
အမျိုးမျိုး ပါးစပ်ဥပဒေများပြုလုပ်နေသောကြောင့် ဒုက္ခတော်တော်ရောက်ကျရပါသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်၊ နေနေ အခွန်ဥပဒေကို တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲဖြစ်စေခြင်ပါသည်။
အခွန်ထမ်းဆောင်ရန် သံရုံးသို့ သွားလျင်လဲ၂ပတ်၃ပတ် အချိန်ယူပြီး ရက်ချိန်းပေးတတ်ပါသည်။
သမ္မတကြီးထံ ရိုသေလေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
barronbala, hellocatcat, kokoye, loon, MNO.BN, mrlynn, Perigee, RunAtServer, staraye, talkyboy, ThunderHawk, yokesoe, zzz
02-29-2012 12:13 PM #508
jrefrmjynfjyefjyD; tcGefraqmifzl;awmY tJ'DrSm b,favmufaqmif&vJ aocsmawmY rodygbl;/ 'gayr,fY pvHk;oH&Hk;u aqmifcdkif;wm 10%? oljyefaqmifcJYwm 40% qdkawmY oH&Hk;uae jcm;em;cGeftaeeJY Refund jyef&rSmvm;[if/
achitsone, barronbala, Chit.tat.lun.tu, GeneralBoz, KaungKinPyar, kokoye, mgknow, MNO.BN, nnbrownie, Perigee, RunAtServer, ThunderHawk, zzz
03-01-2012 04:02 AM #509
ပြင်သစ်ကုမဏီတခုမှ အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မြန်မာအလုပ်သမားများကို
မြန်မာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကုမဏီသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ၀န်ထမ်းရှာဖွေလျှက်ရှိနေပါသည်။
ကျူးပစ်ညီအစ်ကိုတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်တော့်ထံမှတဆင့် စီဗွီပေးပို့ပီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
စလုံးမှ အလုပ်လျှောက်ထားမည့်သူများကို မတ်လ (၈)ရက်နေ့ မှာ လာရောက် အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့
ယာယီ ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားပါက အချိန်မှီ စီဗွီပေးပို့ပါရန်နဲ့ အင်တာဗျုးနေ့ရက်နဲ့ အချိန်ကို
၀န်ဆောင်ခကို လုံးဝလုံးဝ ပေးရန်မလိုပါ။
စီဗွီပေးပို့ထားသော မင်ဘာများကိုလည်း အသေးစိတ်တော့ အီးမေးလ် ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Report to - Product Support Manager
Division - Heavy Eqpt.
Skills/Experience - 3-5 years experience in the Heavy Equipment Industry
Salary Range - US$ 1000-1200
Benefits - Phone allowance, Medical
Expected Start Date - 1st of March 2012
Report to - Manager
Division - IMD - AFS.
Skills/Experience - Level2skills min
Salary Range - US$ 1300 - 1500
Benefits - Housing assistance, medical
Expected Start Date - ASAP
Job Title - Vehicle Electrician
Salary Range - US$ 1450 - 1600
Job Title - HED Technician
Report to - Technical Manager
Division - Group Service
Skills/Experience - 3-8 years experience
Salary Range - US$ 1000 - 2500
Expected Start Date - April 2012
Report to - WORKSHOP SUPERVISOR
Division - AUTOMOTIVE
Skills/Experience - SHOULD HAVE ATLEAST5YEARS EXPERIENCE IN
COMPUTER SCAN TOOL BASED DIAGNOSTICS AND ELECTRICAL WIRING
Salary Range - US$ 500 TO 750
Benefits - HOUSING, AIR TICKET FOR SINGLE ONCE IN EVERY TWO YEARS
Expected Start Date - 1 May 2012
Division - HED
Skills/Experience - SHOULD HAVE ATLEAST5YEARS EXPERIENCE IN TROUBLE
SHOOTING ENGINE / HYDRAULICS SYSTEM - ELECTRIAL SKILLS ADDED
ADVANTAGE - KOMATSU RANGE
Salary Range - US$ 750 TO 1000
Division - POWER DIVISON
Skills/Experience - SHOULD HAVE ATLEAST3YEAR EXPERIENCE IN TROUBLE
SHOOTING ELECTRICAL / MECHANICAL SYSTEM IN SDMO GENERATOR,
MANUFACTURER CERTIFICATION PREFFERABLE
Expected Start Date - SEPTEMEBER 2012
Job Title - Parts Supervisor
Report to - D.Dobson
Division - HED Dept
Skills/Experience - Kerridge, Heavy Equipment, PC Lit.
Salary Range - US$ 2,000 + Neg after probationary period.
Benefits - One month R&R after each six months served
65 9835 9968
abacus04, barronbala, Chit.tat.lun.tu, Deadmanwalking, hellocatcat, KaungKinPyar, kohtwe, kokoye, La Goon, MNO.BN, Perigee, RunAtServer, talkyboy, yokesoe, ZuKa
03-01-2012 05:37 PM #510
စင်ကာပူကို visit pass နဲ့သွားတာ ပထမအခေါက်နဲ့ ဒုတိယ အခေါက်ကြား ၆လ မရှိရင် Extension ထပ်တိုးလို့မရဘူး ကြားတယ်။ သိသူများ confirm လုပ်ပေးကြပါဗျာ။ တော်ကြာ stay တလပဲနေပြီး ပြန်နေရမှာ စိုးလို့။
barronbala, changralong, Chit.tat.lun.tu, daylight, GeneralBoz, kokoye, MNO.BN, Oscar Htun, Perigee, RunAtServer, softsin, yokesoe